အလုပ်အကိုင် - အလုပ်အကိုင်သတင်း | စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး
သူ့အကြောင်းသတင်းများ အလုပ် နှင့်အလုပ်လက်မဲ့။ ဤအပိုင်းတွင်သင်သည်အလုပ်သမားအဆင့်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသောဥပဒေပြုရေးအပြောင်းအလဲများအားလုံးကိုသင်နှင့်နောက်ဆုံးအခြေအနေရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ငါတို့သည်လည်းအဓိကအကြောင်းသင့်အားအကြောင်းကြား အလုပ်အကိုင်စစ်တမ်းများ နှင့်စပိန်နှင့်ဥရောပ၌အလုပ်လက်မဲ့။
၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ဤအပိုင်းတွင်အလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်သတင်းများနှင့်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ရာသတင်းများအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုနိုင်ငံသားအများစုနှင့်သက်ဆိုင်သောခေါင်းစဉ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလုပ်ခွင်.
ငါ့မှာ အလုပ်2ခုရှိရင် နှစ်ဆ ပေးရမလား?
por Encarni Arcoya လွန်ခဲ့တဲ့2လအတွင်း .
အလုပ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ နှစ်ခုရှိတာက ပိုပိုပြီး အဖြစ်များလာတယ်။ အလုပ်အကိုင်မလုံခြုံမှုနဲ့...
လျှောက်လွှာကြိုတင်ဖြေဆိုရန် SEPE မည်မျှကြာသနည်း။
အလုပ်ပြုတ်သွားပေမယ့် အလုပ်လက်မဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်တွေကို စုဆောင်းနိုင်မယ်ဆိုတာ သိလာတဲ့အခါ ပိုပြီးတော့ စိတ်အေးလက်အေး ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့်၊…
အလုပ်လက်မဲ့များအတွက် ERTE ကိုးကားပါသလား။
por Claudi casals လွန်ခဲ့တဲ့2လအတွင်း .
2020 တွင် ကြီးမားသော COVID ကပ်ရောဂါကြောင့် ERTES ဟုခေါ်သည့်အရာသည် အလွန်အရေးပါလာသည်…
အခကြေးငွေနှင့် အသုံးမပြုသော အားလပ်ရက်များကို စုဆောင်းနည်း
por Encarni Arcoya လွန်ခဲ့တဲ့3လအတွင်း .
စာချုပ်တစ်ခုနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ၊ ဥပဒေအရ၊ သင်သည် အားလပ်ရက်များ ဆက်တိုက်ရပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း သင်သိပါသည်။ သို့သော်၊…
သတ်မှတ်မထားသော စာချုပ်တစ်ခုတွင် စမ်းသပ်ကာလ- ၎င်းသည် မည်မျှကြာမည်၊ အလုပ်ထုတ်ခံရပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။
အလုပ်တစ်ခုရဖို့ဆိုတာ လူတော်တော်များများရဲ့ အိမ်မက်ပါပဲ၊ အထူးသဖြင့် ယာယီစာချုပ်အစား သူတို့က မင်းကိုကမ်းလှမ်းရင်...
နွေရာသီအပိုဆောင်းလစာကို ဘယ်အချိန်မှာ ကောက်ခံမလဲ။
စာချုပ်တစ်ခုရှိခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းဖြစ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများထဲမှတစ်ခုမှာ သင်လက်ခံရရှိခြင်းမဟုတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအငြိမ်းစားယူခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်း
ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများသည် အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားများထက် အားသာချက်အချို့ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်လည်း အားနည်းချက်များစွာနဲ့ အငြိမ်းစားယူခြင်းကတော့ တစ်ခုပါပဲ…
အလုပ်နှင့် လစာ ရပ်ဆိုင်းခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်း
ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ၎င်း၏အလုပ်သမားများအား ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် အခြေအနေများဖန်တီးခြင်းမှ တားဆီးရန် လိုအပ်သောလက်နက်များထဲမှတစ်ခု...
အလုပ်လက်မဲ့များကို အွန်လိုင်းတွင် အဆင့်ဆင့် တံဆိပ်ခတ်နည်း
por Encarni Arcoya လွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်း .
အလုပ်လက်မဲ့ အင်တာနက်ကို အဆင့်ဆင့် တံဆိပ်ခတ်နည်းကို သိဖို့က မခက်ပါဘူး။ စနစ်ရှိပေမယ့်...
အလုပ်သမားတိုင်း လိုချင်တာ က သူ့အလုပ်ကို ဆက်လုပ် ဖို့ပါပဲ။ သို့သော် အချိန်အခါများစွာရှိပါသည်...၊
por Encarni Arcoya လွန်ခဲ့တဲ့7လအတွင်း .
အလွတ်တန်းဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို တစ်ကြိမ်ထက်မက ကြားဖူးမှာ သေချာပါတယ်။ တကယ်တော့ အခုခေတ်က ဖက်ရှင်လို့ ပြောလို့ရတယ်။